Mayelana NATHI - Chengdu Region Technology Co., Ltd.
Inkampani yethu yasungulwa ngoMashi 2009 futhi itholakala eChengdu, inhlokodolobha yaseTianfu eSichuan Basin entshonalanga yeChina. I-Chengdu Region Technology Company Limited inolwazi lokungenisa nokuthekelisa, ikakhulukazi olwenza imikhiqizo nezinsizakalo zokungenisa nokuthekelisa. Ensizakalweni: besilokhu sinamathela kumqondo wenkonzo yokwaneliseka kwamakhasimende, ebusweni bemakethe: kufanele siqinisekise ikhwalithi ngasikhathi sinye ukuhlinzeka ngamanani emikhiqizo anokuncintisana okuphelele nezinzuzo, sinamathela ekunikezeni amakhasimende ngezigaba zokuqala ikhwalithi yomkhiqizo nohlelo lwesevisi oluhle kakhulu, ekhaya nakwamanye amazwe amakhasimende ukunqoba idumela eliphezulu kakhulu.
Ikhadi lethu lomswakama eliyinhloko, ikhethini lezinyosi lingakunika insiza engabizi kakhulu nesevisi esezingeni eliphakeme. Ukusetha kwenkampani, ukuthengiswa kwempahla, ukwakheka, ukuvunyelwa kwamasiko, kanye nokuthengiswa ngemuva kokunye ukuhlinzeka ngohlu olugcwele lokuhlangenwe nakho kwezinsizakalo zomkhiqizo, singenza futhi nemikhiqizo esezingeni eliphakeme ukuze amakhasimende abe nenkululeko eyengeziwe yokuzikhethela.
Ngekhwalithi ephezulu kakhulu,
insiza esebenza kahle kakhulu.
Yiba owuthandayo emhlabeni
Okuqondiswe kubantu, okuqondiswe kwincwadi,
ikhasimende - kugxile
Thola Insizakalo Yethu
Ukuqwashisa ngomkhiqizo weChengdu Region Technology Company Limited kukhule. Ngokuhambisana nenqubo yokukhiqiza okusebenzayo, ukuphathwa kobuqotho, ukudala amakhasimende kuqala; Lwela ukuba ngumhlinzeki okhethwe umhlaba wonke kumakhasimende, ukuhlinzeka imakethe ngekhwalithi ephezulu kakhulu, insizakalo esebenza kahle kakhulu.
Ukuhlelwa Kwenkampani Kwakusasa
Sizokhulisa kancane kancane inani lezinhlobo zomkhiqizo, sibuyekeza njalo noma sithuthukise ikhwalithi yomkhiqizo. Vumela amakhasimende ukuthi abone imikhiqizo eminingi kusayithi. Futhi kancane kancane sithuthukise uhlelo lokuhlukahlukaniswa kokuhwebelana kwamazwe omhlaba.
Ukuhlola Umswakama Card, Ikhadi Lesikhombi Somswakama Mahhala, Ikhadi Lokukhomba Umswakama, Ikhadi lamahhala leCobalt, Ikhadi Lezikhombisi Lomswakamo Lamachashaza Ayisithupha, ICobalt Mahhala,